Sarudzo dzeEurope dzinokanganisa pamusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Sarudzo dzeEurope dzinokanganisa misika yemasheya
Sarudzo dze2019 dzeParamende yeEuropean munyika dzese dzeEuropean Union dzakarongerwa kuitwa neSvondo, Chivabvu 26, 2019. Sarudzo dzekupedzisira dzeEuropean dza2014 ndidzo dzaive dzakakura sarudzo dzemunyika yose izvo zvisati zvamboitwa panguva imwe chete. Asi panguva ino pane zvakawanda zviri panjodzi uye izvo pasina mubvunzo zvichave nekukanganisa kumisika yemari. Zvakanaka mune imwe pfungwa kana imwe, zvinoenderana nemhedzisiro inouya kubva muvhoti dzeEuropean.
Sarudzo dzeEuropean muna Chivabvu 2019 dzinozove nekukanganisa kwakananga pahupenyu hwevagari vemuEurope. Ivo vachatonga kuti Europe ichaita sei mumakore anouya maringe nezvimwe zvinonetsa zvevaEurope, maererano nebasa, bhizinesi, chengetedzo, kutama uye shanduko yemamiriro ekunze. Asi zvinogona zvakare kuve mune iyo kudyidzana kudyara uye zvakajairika nenyika inogara iri yakaoma yemari. Iko kunowanikwa masheya ezvekuchengeta achanyatsoteerera kune zvinogona kuitika nemhedzisiro musarudzo dzeEuropean.
Kugovaniswa kwezvigaro kwakatemwa muEuropean Zvibvumirano. Chinhu chinotarisisa chekuparadzira huwandu hwevanhu venyika imwe neimwe, kunyangwe nyika dzine vanhu vashoma dziine zvigaro zvakawanda zvinechekuita neyakaenzana. Parizvino huwandu hwevamiriri hunobva pamatanhatu kubva kuMalta, Luxembourg neCyprus kusvika makumi mapfumbamwe nematanhatu kubva kuGerman. Nepo kune rimwe divi, Spain iri mudanho repamusoro mukugovera zvigaro zveparamende yekondinendi uye inogona tamba basa rakakosha kwazvo kuona mutemo wemunharaunda.
1 Anotarisa Masoko eSitoko
2 Yakawanda yakaipa mamiriro
3 Maitiro anonyanya kunetseka kumhedzisiro
4 Zvimwe zvinhu zvakagadzikana
5 Pedyo zvakanyanya nezhizha
6 Sarudzo dzeEuropean: sarudzo yesarudzo
Anotarisa Masoko eSitoko
Zuva rakatevera sarudzo dzemuEurope muna Chivabvu, misika yekuenzanisira yekondinendi yekare ichapa mutongo, zvichienderana nezvabuda. Chero kuongororwa kuno pfuura ne kuumbwa kwezvino kweParamende European ichagamuchirwa noushamwari nemasaga. Zvinofungidzirwa nekukwira mukukoshesa kwemitengo uye uko kukosha kwenzvimbo yemabhangi ndiyo ichave inobatsira zvakanyanya kubva muchiitiko ichi. Izvi zvinowedzera zvinogona kutomisikidzwa zvine simba rakasimba kwazvo, zvese mukureba kwavo uye mukufamba kwekumira kwavanogona nyeredzi kubva pazuva iro zvichienda mberi.
Chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya ndechekuti mauto anopesana nemaeuropean kana chevanhu vanochekwa vakakwanisa kudarika zvavaitarisira pasarudzo uye vaigona kudzora kamera. Hapana mubvunzo kuti kana mamiriro ezvinhu aya akaitika, kurasikirwa kwacho kunowanikwa mumisika yequity uye neyakajairika kusimba. Nenzvimbo dzese dzemusika wekutengesa dzakakanganiswa uye pamwe pasina nzvimbo dzakachengeteka dzinogona kukwezva mari yevatengesi. Chimwe chinhu chinogona kuve nemhedzisiro yakakomba kumisika yemasheya, zvese munguva pfupi nepakati. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Yakawanda yakaipa mamiriro
Kana pakupedzisira chiitiko ichi chikaitika, hapana mubvunzo kuti chiyero chakanyanya kungwara icho vatengesi vadiki nepakati vanogona kutora iri kugadzirisa zvigaro zvavo mumisika yemari. Zvirinani kwenguva yakati rebei kana shoma muchadenga nekuti kurasikirwa kwavanogona kutambura kunogona kutaurwa zvakanyanya. Kusvika padanho rekuti panogona kuve nekushandurwa kwemaitiro mune makuru eEuropean indices.
Nepo kune rumwe rutivi, hazvigone kukanganwika kuti mune idzi sarudzo dzeEuropean nzira ye gadzirisa ino yakasarudzika hupfumi uye mari nzvimbo. Chero mhedzisiro inoganhurira mashandiro emabasa aya ichave yakanyanya kutorwa nemisika yemari. Kusvika padanho rekuti panogona kuve nekucheka kwakanyanya mukukoshesa kwemitengo yemasheya ematokisi. Ichi chinhu chakakosha kwazvo chekuti pakupedzisira chinozokanganisa kudyara kwako uye nekuda kwechikonzero ichi zvinokurudzirwa kuti uongorore portfolio yako kana zvakabuda musarudzo dzeEurope muna Chivabvu 2019 zvazivikanwa.
Maitiro anonyanya kunetseka kumhedzisiro
Hapana mubvunzo kuti pachave nemamwe makambani akanyorwa anozonyanya kuda kuwedzera kuwedzera kana kuderera kwesimba rakakura kupfuura mamwe. Mupfungwa iyi, cyclical stocks ichave imwe yeanonyanya kunetseka kune aya mafambiro mumisika yemari. Hazvishamisi, zvakare pasi pemamiriro ezvinhu akajairwa vanopa a kusagadzikana kukuru uye nemusiyano pakati pemitengo yayo yepamusoro uye yepasi izvo zvinonyanya kukosha. Iko, zvichienderana nemhedzisiro, iwe unogona kutora imwe kana imwe nzira. Asi mune chero zvazvingaitika, iine kusimba kwakanyanya kupfuura mamwe matunhu emusika wemasheya.
Kune rimwe divi, chimwe chezvikamu zvebhizimusi zvichazotarisirwa kubhadharwa ndeyeyemari uko kune mabhanga ese akanyorwa. Izvo zviri kuonekwa mumavhiki ano kuti ndeimwe yeakanyanya kwazvo mumisika yemari. Nekukoshesa kana kuderera kweinenge mazuva ese kutenderera 2% kana 3%. Aya mafambiro anogona kudzokororwa kana kusimbiswa mushure mesarudzo dzeEurope muna Chivabvu 2019. Kuva zano rine njodzi kana ukavhura zvinzvimbo mazuva ano. Zvichava zviri nani kana iwe uri kutarisira izvo zvinogona kuitika mumazuva mashoma anotevera.
Zvimwe zvinhu zvakagadzikana
Kunyangwe pane zvinopesana, kune zvekare nhevedzano yemaitiro anokupa runyararo rukuru rwepfungwa kutarisana neiyi sarudzo yesarudzo. Zvingave sei neimwe nzira, iyo inomiririrwa nehunhu hwesimba remagetsi chikamu. Hazvishamisi kuti mune mamwe mamiriro vanowanzoita se kukosha kwekupotera pamberi pekusadzikama kwezviitiko mumisika yemari. Uye zvechokwadi, musarudzo dzinotevera dzeEuropean vanogona kudzokorora basa iri ravakatamba zvakanyanya mumakore apfuura.
Uyezve, hatigone kukanganwa kuti aya makambani akanyorwa vanogovera zvikamu nekudzoka kwegore kuri pakati pe5% ne7%. Mune mamwe mazwi, ivo vanokupa iwe mukana wekuvaka yakatarwa yemari portfolio mukati meiyo kusiana uye izvi kunyangwe chero zvikaitika mumisika inoshanduka yemari. Iwe uchave uine huwandu hwemari mune yako yekutarisa account, kunyangwe kana kukosheswa kwemasheya ako kuchiderera pamazuva akakosha aya. Inogona kunge iri nguva yakanaka yekuti iwe uzarure zvinzvimbo mune ino chikamu uye kunyangwe paine kuwedzera kwazvino kwakaitika kubvira zhizha regore rapfuura. Nekudzokorora padyo padyo ne30% mune dzimwe nguva, senge Endesa.
Pedyo zvakanyanya nezhizha
Chimwe chezvinhu zvinopesana nesarudzo dzeEuropean muna Chivabvu 2019 ndechekuti ivo vari padyo nezhizha. Ndokureva, nguva iyo huwandu hwechibvumirano hunodonha zvakanyanya uye nekudaro zvinobatsira mukuvandudzika kwekudonha kwakadzika munzvimbo dzekutengesa. Sezvakaitika mumakore apfuura uye kuti ivo vakaona sechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati vakadzoka vaine mari shoma mupotifoliyo yavo yekuchengetedzeka dzoka kuzororo rako. Iyi ndiyo mamiriro ezvinhu aunofanirwa kudzivirira zvachose uye zvinodikanwa kuti uvhare zvinzvimbo kuti uzviite, inofanirwa kuitwa pasina chero dambudziko.
Izvo zvinofanirwa zvakare kutaurwa kuti isu tiri panguva iyo misika yezvemari inogona kuramba pasi mushure meongororo dzichangoburwa. Zvinosarudzwa, saka, kusave kuvhurika kune zvinzvimbo pamastock exchange pamberi peizvo zvinogona kuitika mushure mesarudzo dzeEuropean muna Chivabvu. Sezvo pasina kupokana kuti pane zvakawanda zvaunogona kurasikirwa pane kuwana nekuti inogona kuve chikonzero chakakwana chekugadzirisa kwakakosha mumatengo emitengo kuti zviitike. Muchidimbu, inguva yakaoma kwazvo iyo yaunenge usina imwe sarudzo kunze kwekukunda dutu rinogona kuitika kubva musi iwoyo zvichienda mberi. Pakazara, mwedzi yakati wandei mauri kunze kwemisika yemari uye ndiyo nguva inodarika nekukurumidza. Usakanganwe kubva zvino zvichienda mberi.
Sarudzo dzeEuropean: sarudzo yesarudzo
Mitemo yekusarudza vatevedzeri inoda mune chero ipi mhando imwe yemhando yakamiririrwa. Sisitimu inovimbisa kuti kana bato rikabudirira, semuenzaniso, 20% yemavhoti, inowanawo makumi maviri ezviuru zvezvigaro zvakakwikwidzwa, kuitira kuti mapato makuru neadiki ave nemukana wekutumira vamiriri vavo kuParamende yeEuropean. Nyika yega yega yakasununguka kuseta zvimwe zvakawanda zvakakosha maitiro esarudzo. Semuenzaniso, mamwe matunhu anopatsanura dunhu ravo kumatunhu enharaunda esarudzo nepo vamwe vaine dunhu rimwe chete resarudzo.
Sarudzo dzinopindwa nemapato emunyika, asi kana vatevedzeri vasarudzwa, vazhinji vanosarudza kuve chikamu mapato ezvematongerwo enyika. Mapato mazhinji emunyika akabatana nebato rezvematongerwo enyika reEurope, saka mumwe wemibvunzo mikuru pahusiku hwekusarudza kuziva kuti ndeapi emapoka eEuropean ane simba rakakura mudare reparamende rinotevera Uye izvo izvo iyo misika yemakero ichave ichinyatso kuziva, kusvika padanho rekuti inogona kuva chikonzero kwavari kuti vasimuke kana kudonha mumazuva mushure mesarudzo dzeEuropean gore rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Sarudzo dzeEurope dzinokanganisa misika yemasheya
Ndiri kurasikirwa nemari: chii chandingaite?
Cheka muhuwandu hwemakambani esimbi